« Andraikitry ny rehetra » -
AccueilTresaka« Andraikitry ny rehetra »
09/07/2018 admintriatra Tresaka 0
Dimy volana eo sisa dia handatsa-bato hifidy izay Filoha vaovao hitondra an’i Madagasikara ny olom-pirenena. Raha izao toe-draharaha misy ankehitriny izao anefa, dia mampanahy ihany ny hahatongavana amin’izany. Toa mihamafy andro aman’alina ny hetsiky ny mpampianatra manao fitakiana etsy Antanimbarinandriana sy manerana ny Nosy. Manampy trotraka izany ny fidiran’an-tsehatry ny vondron’ny sendika Ssm ao anatin’io hetsiky ny mpampianatra io. Ny etsy amin’ny Parvis an’Analakely ihany koa manginy fotsiny. Sanatria tsy manamaivana an’ireo fitakiana samihafa mipoitra etsy sy eroa ireo, fa fotoana izao tokony hahatsiarovan’izy ireo tena sy hanehoan’izy ireo ny tena fitiavan-tanindrazana, ka hanajanonany izany avy hatrany ho fanajana ny fitoniana takian’ny fanatanterahana ny fifidianana.
Mba olona manana ny maha izy azy ihany ny mpitarika ao anatin’io sendikan’ny Ssm io ka mahalala tsara ny hevitr’izany fitiavan-tanindrazana izany. Toraka izany koa ny mpampianatra manao fitokonana, tsy atoro ny dikan’izany koa izy ireo. Efa dimy volana kely no andrasan’ny Malagasy hanatanterahana ny fifidianana dia mbola korontanina amin’ny fitakiana, mbola azo tohizana amin’ny fitondrana vaovao ho avy eo.
Tokony hampandefitra ny hambom-pony avokoa aloha ny mpanao fihetsiketsehana rehetra amin’izao fotoana ireo. Azo hatao ny manao fifanarahana eo amin’ny fitondram-panjakana sy ireo mpanao fihetsiketsehana mba hisian’ny fitoniana aloha.
Azo antoka kokoa ny fivahan’ny olana rehefa tonga eo ny Filoha vaovao sy ny governemantany. Sarotra mantsy ny hamahana fitakiana ao anatin’izao fotoana fohy natokana hikarakarana fifidianana fotsiny izao. Andraikitry ny rehetra ny hanao izay hahatontosana ny fifidianana, fa tsy andraikitry ny Ceni sy ny governemanta irery ihany. Takiana any amin’ireo mpanao fihetsiketsehana ireo ny fananana ilay fitiavan-tanindrazana tena izy, ka hampitsaharan’izy ireo avy hatrany izay fitakiana mitarika savorovoro eto amin’ny tany sy ny firenena. Tsy misy mahita tombontsoa amin’ny krizy vaovao aterak’izao savorovoro entin’ny mpanao fihetsiketsehana izao.